राजेश हमाल ‘महानायक’ मात्रै होइनन्, युगदेखि युगसम्मका जनताका नायक हुन् -
३१ असार २०७७, बुधबार ०५:०८ Hello Nepal Tv	0 Comments
अंग्रेजीमा एउटा निकै प्रसिद्ध टुक्का छ ‘लिटल नलेज इज भेरी डेन्जरस्’ । नेपालीमा यसको अर्थ हो ‘अल्पज्ञान निकै खतरनाक हुन्छ ।’ हो आज त्यही अल्पज्ञानको शिकार बनेकी छिन्, दिपाश्री निरौला । महानायकको सवालमा एउटा अन्तर्वार्तामा दीपाश्री प्रतिप्रश्न गर्छिन्, ‘के राजेश हमाल महानायक हो र ? तपाइले बनाइ दिएको उहाँलाई महानायक ?’
दीपाश्रीको यो प्रतिप्रश्नले महानायकको पदवीलाई अस्वीकार मात्रै होइन, अविश्वास समेत प्रकट गरिन् । दीपाश्रीको त्यो अभिव्यक्तिले राजेश हमालले नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा दिएको योगदानलाई अवमूल्यन गरिन् । हो, त्यसैको परिणामस्वरुप राजेशका समर्थक/फ्यानहरुले दीपाश्री र दीपाश्रीलाई जोगाउन मैदानमा आएका दीपकराज गिरीको खेदो खनिरहेका छन् । अग्रज कलाकारमाथि कसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सबक सिकाइरहेका छन् ।
दीपाश्रीले उठाएका यो प्रश्न भने नेपाली चलचित्र बजारमा बेलाबेला उठ्ने गरेको पाइन्छ । के राजेश हमाल नेपाली सिनेमाको महानायक होइनन् त ? यो प्रश्नको जवाफ माग्ने र दिनेहरु आजसम्म पनि छन्, भोलि नहोला भन्न सकिन्न ।
कुनै समय मिथुन चक्रवतिको क्रेजले बलिउड लठ्ठ थियो । उनका लामो कपाल, डिस्को डान्स, डाइलग मार्ने स्टाइल र एकशनले दर्शकहरु नतमस्तक थिए । उनको ‘दि डान’ मूभी हेर्न दमकको हलसम्म म पनि गएको थिए । त्यसबेला मिथुनको हलहरुमा छुट्टै रौंनक थियो । त्यसैको केही समय पछि अर्को फिल्म आयो । लामो कपाल भएको, अग्लो कदको र निकै रिसाएको अनुहार सहितको पोस्टर देखियो । पक्कै मिथुनको नयाँ फिल्म आएछ । नाइट शोमा लाइन लागेर बल्लबल्ल हलमा प्रवेश गर्न पायौं । केही समय पश्चात फिल्म सुरु भयो । तर, फिल्म हेर्दै जादा हिन्दीमा संवाद थिएन् , संवाद नेपालीमा थियो । लामो कपाल भएको हिरो मिथुन थिएनन् , नेपाली हिरो राजेश हमाल थिए । जुन मिथनु भन्दा पनि खतरा , जसले मिथुनको क्रेजलाई नेपाली समाजमा सजिल्यै बिस्थापित गरिदियो । बाफ्रे ! जसको लामो र दामी कपाल छ , जसले गुण्डालाई यस्तो पिट्छ , यस्तो फाइट हान्छ अनि खतरा डाइलग मार्छ , नेपालको नयाँ हिरो — राजेश हमाल । फिल्मका पारखीहरु राजेश हमालको बारेमा यसरी गफिन्थे ।
त्यसैले, दिनमा एक गुणा र रातमा चार गुणा गरेर हमाल फिल्ममा चम्किए । उनी त्यती सजिलै दर्शकको आँखा र मनमा बस्न सफल भएका भने होइनन् । उनले त्यस बेलाको नेपाली समाजको वास्तविक्तालाई रिलमा अभिनय गरेका थिए । समाजको परिवेशलाई उजगार गर्न प्रयास गरे । उनका देउता, भाउजु ,भरिया, देउकी, चट्याङ जसता फिल्महरु सुपर हिट भए । जुन फिल्ममा सामन्य मान्छेहरुको कथा थियो । गाँउमा भएका अथवा गरिएका दमन, शोषण, अन्याय र अत्याचारको बिरुद्धमा हमालले संघर्ष गरेका थिए । खलनायकसँग फाइट खेलेका थिए । गाँउ शहरका मान्छेका दुःख, आँशु, अभाव र पीडालाई देखाएका पक्कै थिए । यसकारण, सामन्य मान्छेले हमाल भित्र आफुलाई पाए । आफ्नो जिवनको कहानी र व्यथाहरु पाए । आफ्नो वास्तविक प्रतिनिधित्व पाए । र, हमालका फिल्म हेर्दै उनीहरु समाजमा हुर्किए । तसर्थ, राजेश हमाल ती व्यक्तिहरुको आदर्श नायक बन्न सफल भए । हो, यसमा कुनै शंका छैन् ।
भनिन्छ राजेश हमाल हिरो बन्नु भन्दा पहिले आफ्नो परिवारसँग संघर्ष गरे । जुन समयमा फिल्म जगतलाई एउटा प्रतिष्ठाको विषय ठानिन्दैन थियो । समाज संकुचित विचारको पैतलामुनि दबिउको अवस्था थियो । किनकी पढेलेखेको व्याक्ति फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा बिग्रन्छ भन्ने धारणा थियो । यी सबै दरिद्र सोचलाई वेवास्ता गर्दै उनी यस क्षेत्रमा कटिबद्ध भए । भरखरै बामेसर्दै गरेको उधोगलाई आफ्नो काँधमा राखेर हिड्न संघर्ष गरे । अथाह मिहिनेतका साथ नेपाली चलचित्रलाई एउटा शिखरमा पुर्याउन विशेष भुमिका निर्वाह गरे । र, धेरै युवा पीढिहरुले उनको अनुकरण गरे पनि । यो यथार्थ हो । तर, राजेश हमालको योग्दानलाई र जनताको चाहनालाई एउटा कलाकारको नाताले यसरी खुइल्याउँन जायज हुन्छ् ? के खुट्टा तान्ने प्रबृति न्यायपूर्ण छ ? दुईचार वटा फिल्म चल्दैमा, केही पैसा कमाउँदैमा अग्रजको योग्दानलाई भुल्न मिल्छ ?
यो एउटा उद्दाहरण मात्र हो । केही कुरा प्राप्ती भयो भन्दैमा आफ्नो धरातललाई बिर्सिने नेपाली संस्कृति मौलाउँदै गएको आभास यस घटनाबाट पुष्टि हुँदैछ भन्नका लागि हिच्किचाउँनु पर्दैन । त्यसकारण, नेपाली चलचित्र क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि खुट्टा तान्ने प्रबृति नभएको होइन् । हरेक क्षेत्रमा हिलो छ्यापने प्रचलन् हुन्छ । शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक विविध क्षेत्रहरुमा । किनकी सिन्को पनि नभाच्नेहरुको गफ ठूलो हुन्छ । कुप्रचारमा संलग्न हुन्छन् । र, योग्दान गर्नेहरुको निम्ति केही शब्दहरु खर्च गर्न कन्चुसाँइ गर्छन् । मानमर्दन गर्नमा जसरी दिपाश्री आज लागिन अरुको पनि प्रबृति त्यो भन्दा भिन्न पक्कै छैन ।
एउटा कलकार जो दशकौं देखि चलचित्र उधोगमा आवद्ध छिन् , आज उनी नै राजेश हमालले त्यस उधोगमा गरेको अमूल्य योग्दानको बारेमा अनविज्ञ भइन् । आजसम्म दिपाश्री निरौला जुन पेशामा संलग्न छिन् , आज त्यही पेशाको अपमान गर्न समेत पछाडि परिनन् । किनभने उनीसँग यस विषयमा अल्पज्ञान थियो भने यसरी चुरिफुरी गर्दै बोल्नु हुन्न थियो । तसर्थ, हरेक क्षेत्रमा आबद्ध व्याक्तिहरुले आफ्नो पेशालाई सम्मान गरौं । त्यस क्षेत्रमा योग्दान गर्ने व्याक्तिको प्रशंसा गरौं । उनीहरुको योग्दानको नजर अन्दाज होइन् , उच्च मूल्याङकन गरौं । जसरी दिपाश्री निरौलाले राजेश हमाल ‘महानायक’ होइनन् भनेकोमा अहिले पश्चाताप गर्दैछिन् । भलै राजेश हमाल दिपाश्रीको आँखामा महानायक भए नभए पनि केही फरक पर्दैन । किनकी राजेश हमाल युगदेखि युगसम्म नै जनताको नायक हुन् । बरु हामी सबैले यस घटनाबाट के पाठ सिकौं भने कोही पनि विवेकहीन तरिकाले आफ्नो कम्जोरीलाई ढाकछोप गर्ने एउटा कुख्यात टपरटुइयाँ कदापी नबनौं ।
← मैले चिनेको महानायक-राजेश हमाल
नेपालकी ६ वर्षीय बालिका गिनिज बुकमा नाम लेखाउने तयारीमा →
३० भाद्र २०७७, मंगलवार १३:३६ Hello Nepal Tv	0